Ny fanofana bisikileta ao Sri Lanka ~ Journey-Assist - Scooter. Moped. Endrika fanofana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Ny fanofana bisikileta ao Sri Lanka
6 Desambra, 2019
Toe-javatra amin'ny ankapobeny amin'ny bisikileta manofa
Ny sandan'ny fanofana bisikileta
Ny tafiditra ao amin'ny fanofa-trano
Fifamoivoizana eny an-dàlana. Zava-dehibe !!!
Fahazoan-dàlana mitondra fiara. Paikady ahazoana zo maharitra
Inona no tokony hodinihina rehefa manofana bisikileta iray
Polisy mpamily polisy any Sri Lanka
Ny fanofana an'i Tuk tuk
Ny toe-javatra ankapobeny amin'ny fanofana bisikileta ao Sri Lanka
Ny fanofana bisikileta dia serivisy malaza amin'ity firenena ity. Ny toerana manofa trano dia mora hita any amin'ireo faritany fizahan-tany malaza indrindra any Sri Lanka. Any amin'ny faritra afovoan'ny firenena, saika tsy misy izany. Saingy ao amin'ny tanàna mpizahatany dia tsy sarotra ny manofa bisikileta. Ho anao, ohatra, dia mahaliana anao amin'ny hotely na mandeha an-dalana fotsiny ianao, mitady famantarana na bisikileta mijoro miaraka amin'ny soratra "Bike for rent."
Manofa bisikileta (scooter) any Sri Lanka
Tombanana ho lafo ny bisikileta (scooter) tamin'ny 2020. Sri lanka
Negombo - 1500 rupees (8.3)
Trincomalee (Trincomalee) - 1200 ($ 6,6)
Hikkaduwa (Hikkaduwa) - 1200 ($ 6,6)
Unawatuna - 1200 ($ 6,6)
Bentota (Bentota) - 1200 ($ 6,6)
Jaffna (Jaffna) - 1500 (8.3)
Nuwara Eliya - 1500 (8.3)
Ella (Ella) - 1200 ($ 6,6)
Tangalle (Tangalle) - 1500 ($ 8,3)
Raha sendra ny be loatra, dia andrasana ny fangatahana entana. :).
Ny vidin'ny isan'andro dia manofa bisikileta (scooter) miaraka amin'ny boaty mandeha ho azy. Na izany aza, tokony ho mangataka fihenam-bidy ianao rehefa alaina mandritra ny fotoana maharitra ny bisikileta (farafaharatsiny mandritra ny herinandro). Rehefa dinihina tokoa, raha lava kokoa ny fotoana hanofa, ny lehibe kokoa ny fihenam-bidy.
Raha ny manofa trano mandritra ny fe-potoana mihoatra ny 10 andro dia azonao antoka tsara ny isa 20% ambany. Ary raha iray volana, dia ho 30% +.
Ny nampidirina tamin'ny fanofana bisikileta
Ny kilaometatra tsy voafetra
Helmet (s) (raha sendra fatiantoka dia azo vidiana ny satroka iray 500-700 Rs)
Tahirin-kevitra amin'ny bisikileta manamarina ny fandoavana hetra sy ny tompony. (fahaverezan'ny fiantohana sy antontan-taratasy mazàna dia mandoa onitra 50 $ rehefa miverina amin'ny tompony ny bisikileta)
Ny fanofana bisikileta mandritra ny andro iray dia tsy midika hoe fampiasana azy mandritra ny iray andro. Ho an'ny mpaninjara maro, ny ora atoandro ihany no atao trano manofa trano. Amin'ity tranga ity dia alaina ny maraina ny bisikileta ary miverina amin'ny hariva (efa vita ny fifanaovana marina.) Raha ny resaka fanofa trano mandritra ny andro maromaro, ny fampiasana ny bisikileta, mazava ho azy, dia afaka manodidina ny famantaranandro.
Ny vidin'ny fanofana farany ambany indrindra dia mety miovaova arakaraka ny toerana misy azy manokana.
Fametrahana amin'ny fanodinana bisikileta
Raha ny maha-fitsipika azy ireo dia mangataka miala aminy pasipaoro izy ireo satria tahiry (ampy ny sary)
vonjimaika ny fonja. Indraindray dia takiana antoka (vola 100 ka hatramin'ny 300 dolara amerikana)
Raha manofa bisikileta amina hotely na trano fandraisam-bahiny iray ijanonanao ianao dia matetika no tsy takiana ny fametrahana tahiry.
Amin'ny tranga sasany, fifanarahana vita amin'ny fifanarahana.
Indraindray afaka manofa bisikileta ianao nefa tsy misy antontan-taratasy na tahirin-kevitra: misy ny mpizara sasany aza tsy mijery ny pasipaoronao akory, ka ny anaran'ny trano fandraisam-bahiny iray no nandaharanao.
Any amin'ny toerana sasany, dia misy bisikileta hofaina misy fifanarahana izay manome fiantohana, nefa tena tsy fahita firy izany.
Amin'ny toe-javatra tahaka izany, voarindra ny fifanarahana feno manondro ny andraikitry ny mpanjifa.
Toy ny fitsipika, dia manondro izy fa ny mpanjifa dia handoa karama kely izay "voasarika" amin'ny vola latsaky ny 200 dolara amerikana, ary ny orinasa fiantohana no handoa ny ambiny.
Ny mpanova dia kajy vola. Mandrakizay dolara hatrany any Sri Lanka
Tokony ho takatra fa ny bisikileta no fiara azo fehezina indrindra eny an-dalana. Ary izany no antony, indraindray toa tsy miraharaha eny an-dalana izy ireo. Raha ny marina, ireo mpampiasa lalana hafa dia resy lahatra fa amin'ny bisikileta iray no ahafahanao miatrika ny toe-javatra rehetra. Ianao, raha mitsambikina manerana ny zaridaina, dia toa tsy heverinao fa mirongatra eo amoron-dalana ny tsintsina. Resy lahatra ianao fa hiatrika tsara ny zava-misy fa mandrisika azy ireo ianao. Miaraka amin'ny bisikileta, mitovitovy. 🙂
Ary koa, saika ny fiara rehetra dia ahitana fitaratra fanampiny eo amin'ny sehatry ny lamba. Ireo fitaratra ireo dia napetraka manokana amin'ny tanjon'ireo famerenana fanombohana fanampiny momba ireo "zona maty", izay matetika dia mahazo bisikileta kely.
Fahazoan-dàlana mitondra fiara any Sri Lanka
Amin'ny fomba ofisialy, tsy misy zo iraisam-pirenena ekena eto amin'ity firenena ity (ary indrindra ny zom-pirenena amin'ny firenena hafa afa-tsy i Sri Lanka), na izany aza, amin'ny fampiharana, ny polisy eo an-toerana dia tsy mivadika amin'ny raharaha. Raha manana sokajy iraisam-pirenena momba ny zo A sy satroka eo amin'ny lohanao ianao ary raha tsy misy ny fanitsakitsahana ny fifamoivoizana dia tsy azo inoana aminao ny olana amin'ny polisy.
Fahazoana lisan'ny mpamily iray any Sri Lanka
Mba hampandeha ara-dalàna tanteraka ny mitondra fiara bisikileta any Sri Lanka, dia mila miatrika zava-tsarotra maro ianao. Na izany aza, ity fanjakana ity, araka ny efa nolazaina teo, dia manaiky ny zon'ny firenena ananany manokana (ny endrik'izy ireo dia mitovy amin'ny plastika maoderina).
Fahazoan-dalana mitondra fiara maharitra any Sri Lanka
Ny zon'ny Sri Lanka mandalo any Sri Lanka dia tsy azo raha tsy avy ao amin'ny sampan-draharaha misahana ny lozam-pifamoivoizana ao Colombo.
Sampan-draharaha misahana ny lozam-pifamoivoizana
Address: No. 341, Alvitigala Mawatha, Colombo 05, Narahenpita.
telefaonina: +94 11 2694331, 2694332, 2694333, 2694334, 2694335, 2694336
Tranonkala ofisialy http: //www.motortraffic.gov.lk
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/5pVMM5fdEx5srKzx9
Antontan-taratasy ilaina sy ny vidin'ny hahazoana zo:
Pasipaoro manana visa mety. (Ankoatra izany, mila kopia ianao. Azonao atao eo amin'ny fidirana)
Ny fahazoan-dàlana manan-kery.
2000 rupees for clearance
Azo atao eo amin'ny fidirana ny sary 5 ropia
Ny fomba fahazoana ny fahazoan-dàlana mpamily vonjimaika
Midira ao amin'ny faritany. Manana tranobe departemanta maro io. Ianao no mila trano H
Midira ao anatiny. Eo amin'ny fidirana dia hanamarina ireo antontan-taratasinao ny mpiambina ary hamoaka nomerao.
Ny taratasim-bola dia tsy misy ilana azy fa hatramin'izay dia mbola hihazona ny filaharana "filaharana" mivantana
Mandrosoa. Izy io dia ho efitrano misy efitrano maro. Mila booth ianao №1
Mitsangàna. Matetika ny olona vitsivitsy.
Ny mpiasa iray ao amin'ny departemanta ao amin'ny tranoheva no haka ny sarinao, hameno ny fanontanianao, maka sary kavina ary sonia elektronika.
Miaraka amin'ny zava-drehetra voarain'ny varavarankely №1 mankanesa amin'ny iray amin'ireo trano rantsan-kazo 17-20 (na dia efa nilaza ny zavatra rehetra aza ny mpiasa iray, saingy tsy hainao mihitsy)
Eto dia hodinihina indray ireo antontan-taratasy. Hanao fotokopia ho an'ny tenany ry zareo. Hasaina hangataka anao ianao hanoratra amin'ny taratasy fangatahana vita amin'ny adiresin'ny hotely izay hipetrahanao.
Manaraka, mandehana eo am-baravarankely №31. Biraon'ny boaty izany. Mandoa vola 2000 rupees ianao. Makà taratasy eo am-pelatananao. Izy io dia hanoratra ny sokajy fiara misy zonao mitondra fiara any Sri Lanka. (mitovy amin'ny voatondro ao amin'ny zonao). Tsy hisy hampiditra sokajy A aminao raha tsy ao amin'ny zonao.
Mandrosoa amin'ny varavarankely No. 14-16. Atao fotsiny ny baraingo iray miaraka amin'ireo taratasy izay anananao.
Miverina eo amin'ny varavarankely indray №31. Eto ianao dia manome ny antontan-taratasy sy ny fahazoan-dàlana fiarakodia vonjimaika ataonao.
Izay izany :). 2 ora, ary manana fahazoan-dàlana mpamily vetivety ianao.
Momba ny fahazoan-dàlana mpamily vetivety:
Toy izao ny fisehon'ny fahazoan-dàlana vonjimaika iray any Sri Lanka.
Tsy mihoatra ny lanjan'ny visa misy anao ny fahazoan-dàlana anananao amin'ny fotoana hahazoana zo. Fa amin'ny fotoana mitovy tsy mihoatra ny 2 volana.
Misy lalàna iray manamarina fa manan-kery ireo zo tsy maharitra ireo aorian'ny datin'ny datin'ny vanim-potoana iray volana hafa.
Rehefa tapitra ny voambolana rehetra dia mitsahatra tsy manana hery ara-dalàna ireo zo ireo.
Tokony hodinihinao tsara ny bisikileta, sary an-tsary ny fahasimbana rehetra mba hisorohana ny mety ho fisolokiana amin'ny fotoana hiverenany. Mandritra ny fandidiana, tsy afaka mamela ny fiarovan-dohanao môtô tsy voalamina ianao, satria na ny fiarovan-doha, na dia ao anatin'ny tsy fahita firy aza, matetika no nangalatra teto.
Raha toa ka hitranga aminao izany, ny fiarovan-doha vaovao dia azo amidy amin'ny fivarotana maro amin'ny vidiny manomboka 500 ka hatramin'ny 700 rupees.
Toroana hampiasa ny toerana fijanonana fiara sy karetsaka karama fotsiny, satria tsy dia fahita any Sri Lanka ihany koa ny halatra bisikileta. Farafaharatsiny amin'ny faritra fizahan-tany.
Ilaina ny hizaha toetra ny bisikileta alohan'ny fanofaina. Izay feo mikorontana, tsy milamina, mangovitra dia tsy ekena. Ny kodiarana amin'ny kodiarana dia tokony ho ao anatin'ny toe-javatra tonga lafatra, fa tsy reraka. Rehefa esorinao ny kodiarana roa avy amin'ny kodiarana dia tokony handroso tsara ilay bisikileta, tsy misy hivoahana amin'ny ankavanana na havia.
Mila mifidy satroka milamina kokoa ianao. Aza mipetraka noho ny voalohany raha toa ka tsy mety aminao izany. Tsara kokoa, mazava ho azy, raha misafidy fiarovan-doha misy visor, satria ny farany miaro amin'ny masoandro, manakana ny fihoaran'ny masoandro. Ho fanampin'izany, mila maka fiarovan-doha misy fijerena (fitaratra fitaratra mangarahara ianao) izay miaro amin'ny rivotra. Manampy izany ho an'ny maizina izany, satria sarotra ny hitafy ny solomaso amin'ny alina.
Zava-dehibe ny maka karatra mpizara mpaninjara misy ny adiresiny sy ny laharana finday. Raha manana olana ianao, dia tokony hiantso avy hatrany amin'ny tompony.
Raha amin'ny fotoana hamerenanao ny bisikileta, ny mpivarotra dia mitaky anao handoa bebe kokoa amin'ny antony lavitra lavitra na miantso valim-pananana tsy dia misy loatra ho an'ny fahavoazana kely, dia tokony hiantso ny polisy ianao (indraindray dia ampy handahorana hanao izany).
Famoronana bisikileta iray ao Sri Lanka
Ny kilaometatry ny entona an-jatony ho an'ny ankamaroan'ny bisikleta manofa dia 2-2.5 litatra isaky ny zato kilometatra.
Aolin-tsolika A92 no arotsaka amin'ny bisikileta.
Ny tobin-tsolika Sri Lankan dia tsy tia tena.
Mila mandoa mivantana any amin'ny tobin-tsolika akaikin'ny tobin-tsolika ianao.
Mila mitondra fiara mankany amin'ny tsanganana ilaina ianao any amin'ny tobin-tsolika, ary manenoa ny habetsaky ny lasantsy (ny fiara mifono bisikileta malaza indrindra mitazona 3-4 litatra) na lazao fa mila tank feno (feno) ianao.
Hameno solika ny tanky. Raha tsy fantatrao hoe iza amin'ireo tsanganana tokony hivezivezanao, dia tokony hiakatra mankany amin'ilay akaiky misy bisikileta hafa ao amin'ny filaharana, na afaka miakatra mankany amin'ny tobin-tsolika ianao ary miantso anao izy.
Ny haben'ny fandoavam-bola ho an'ny entona feno dia haseho eo amin'ny tsanganana.
Vidiny ho an'ny solika ho an'ny bisikileta iray any Sri Lanka
Ny vidin'ny 1 litatra dia raikitra ho an'ny faritany manontolo ao Sri Lanka. Ho an'ny milina marika 92 amin'ny taona 2019 dia 132 rupees Sri Lankan isaky ny 1 litatra izany.
Voarara ny fivarotana lasantsy amin'ny fitoeran-tsofin-tànana eto amin'ity firenena ity, tsy toy ny ohatra, i Thailandy na i Indonezia.
Fiantohana fenitra, izay ampidirina ao anaty fonosana fitsangatsanganana dia tsy tafiditra ny fiara mpitondra fiara. Koa ilaina ny fiantohana fanampiny, mandrakotra ny fametrahana bisikileta na fanatanjahantena mavitrika (izay ahitàna ny mitondra fiara misy kodiarana 2). Azonao atao ny mahita ny vidin'ny fiantohana toy izany avy amin'ny orinasa samihafa ary mandamina ny fiantohana amin'ny alàlan'ny Internet amin'ny tranokala tahaka izao:
Rehefa hihaona amin'ny polisy zotram-piaramanidina Sri Lankan ianao dia tokony hatoky ianao, manome ireo antontan-taratasy ilaina rehetra ary mitsiky.
Tokony haseho fa ny sokajy A dia ao anatin'ny zonao (raha misy). Raha tsy izany dia azonao atao ny manandrana manome sokajy "B" amin'ny fambara amin'ny teny hoe "Bike" :).
Mitranga izany indraindray, satria tsy ny polisy rehetra ao an-toerana akory no mahalala fa tsy nanao sonia ny Convention Geneva i Sri Lanka.
Raha tsy manome fahafaham-po ny zonao ny polisy, dia fanapahankevitra bitika no olana matetika.
Ho fanampin'ny zo, ny mpamily bisikileta dia tsy maintsy manana fiantohana sy antontan-taratasy manaporofo ny fandoavana hetra.
Ireo antontan-taratasy 2 ireo dia tsy maintsy avoakan'ny tompon'ny bisikileta manofa. Amin'ny tsy fisian'izy ireo dia hanana olana ny mpanjifa, ankoatra ny mpaninjara.
Ao amin'ny bisikileta, izay manofa, ireo antontan-taratasy ireo dia ao amin'ny "compte glove" an'ny bisikileta, izay matetika mipetraka eo amin'ny seza.
Rehefa miresaka amin'ny polisy fifamoivoizana ianao dia tokony mitsiky, miresaka bebe kokoa, mametraka fanontaniana, maneho fankasitrahana ho an'ny firenena.
Amin'ny ankapobeny, ny polisy eo an-toerana dia mitsabo tsara ny mpizahatany.
Manofa tak tuk any Sri Lanka
Ary koa, raha ilaina, dia azo atao ny fivarotana tuk-tuk. Ho mora, ohatra, ho an'ny mpivahiny miaraka amin'ny ankizy.
Ny dokambarotra amin'ny fanofa trano-tuk eny an-dàlana dia mora tsy arena. Serivisy serivisy fidiram-bola ofisialy, toy ny ohatra:
Ny sandan'ny fanofaany tuk-tuk
Raha ny salanisa, ny vidin'ny manofa ny tuk-tuk isan'andro dia manodidina ny $ 25. Marihina koa fa ny vidiny dia mety miovaova amin'ny toerana fandefasana sy fanaterana ny hofan-trano. (azo apetraka na aiza na aiza any Sri Lanka)
Ny tandroka ao anaty fiara fitateram-bahoaka no mahery vaika, ary ny mpamily fiara mpitatitra entana angamba ny lozisialy :). Ary ahoana ny fihetsiky ny fiara fitateram-bahoaka eny an-dàlana dia azo faritana amin'ny mpijery any Sri Lanka! 🙂
Raha tany Colombo izy, uh !! inona no tian'ireto bandy ireto? Ary na izany aza, ny zavatra hilentika dia ny fahatsiarovan-tsain'ny fahatsiarovan'ny mpitantana ny fiara fitateram-bahoaka amin'ireto fiara fitaterana ireto: tadidin'izy ireo hoe iza no tonga vaovao, izay nandoa vola ary aiza no misy izany.
Mahaliana ihany koa ny lasa mpandeha fotsy. Koa satria ny fiaraha-monina any an-toerana dia tena fiaraha-monina sy tsotra toy ny ankizy, ny olona rehetra dia samy mahazo valiny avy aminao, na dia efa nipoitra avy amin'ny olon-kafa aza ny fanontaniana). Mijery anao foana izy ireo, mitsikitsiky ny fomba mahafinaritra anay ireo fomba fijery avy ao anaty bus
Ireo bandy Sri Lankan amin'ny ankapobeny dia lehilahy lehibe, mivezivezy be fotsiny izy ireo.
Ity no Eny). Ireo fiara fitateram-bahoaka tsy misy toa ny anay. Izay renibenay ao anaty bus Sri Lankan, ary ny khan dia mpamily na fonon'ny renibeny 🙂
Ary ahoana ny fahatrarana rehetra eny an-dàlana hitsambikina amin'ny bus ary miala amin'izany.
Tena azo ampiharina, satria maninona no ajanony ny fiara fitaterana raha olona afaka miditra ao ary tsy eo ambanin'ny kodiarana :))
Misy ny fampahalalam-baovao izay ny polisy misahana ny fifamoivoizana dia miezaka ny tsy hikasika ireo mpizahatany any raha tsy hoe tena ilaina tokoa, saika eo amin'ny ambaratonga mpanao lalàna. Ny fanentanana azy dia noho ny fanamafisana ny mpizahatany avy any Sri Lanka dia tsy tsara. Noho izany, izy ireo dia mijery ny tsy fahampian'ny fahazoan-dàlana mpamily ilaina.
Izany hoe, raha tsy mitondra fiarovan-doha ianao na manao fihetsika tsy mendrika tanteraka eny an-dalana dia tsy hikasika anao ny polisy ny fifamoivoizana eo an-toerana.
Nandeha kilometatra iray kilometatra izahay nanerana ny Nosy, dia nijanona in-8 izahay, ary indray mandeha monja no nandoa hetra 500.
Ity fampahalalana ity, mazava ho azy, dia tsy nohamarinin'ny ara-dalàna fa tena mitovy amin'ny marina.
Farafaharatsiny dia mihatra amin'ny faritra mandroso fizahan-tany. Fa raha vitsy ny mpizahatany dia toa mankasitraka ny rehetra eto amin'izao tontolo izao ny polisy :). Izany fahatsapana izany no natao.
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 16